नारीलाई कहिलेसम्म खेलौना बनाउने ? होशियार–नारीको सम्मान गरौं – Newslines Nepal
नारीलाई कहिलेसम्म खेलौना बनाउने ? होशियार–नारीको सम्मान गरौं
प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०७७, सोमबार १०:४८
घरमा नै बसु ! आफ्नो सुरक्षित आफै गरु भनिएतापनि सुरक्षित हुन सकेको छैनन् नारीहरु। लकडाउनको पालना गर्दागर्दैपनि कोरोनाबाट सुरक्षित बचे पनि तर, बचेनन ! मानवको रुपमा दानवरुपि पुरुषहरुमा एउटा प्रश्न के महिला भएर जन्मनु अभिशाप हो ? अपहरण ,हत्या ,आतंकबाट कसरी सुरक्षित हुने नारी ??
दिनप्रतिदिन महिलाहरु आज पनि बलात्कृत भएर शारिरिक शोषण सहन गर्दै बच्न गाह्रो भइरहेको छ। हामी हरेक कुरामा महिला अधिकारको कुरा गर्छौ। महिला सुनिश्चित कोटाको कुरा सुनिरहदा महिला नेतृत्व देखि महिला अधिकारको अधिकारकर्मीको पहुँचको कुरा सुनिरहेका बेला आज यो अबस्थामा पनि बलात्कार शारिरिक शोषण भइरहेको छ। कसले उठाउने पीडित को कुरा ? विडम्बना उल्टो समाजको अगुुवाइ गर्नेहरु मिलाउनु पर्छ– यो कुरा बाहिर लानु हुन इज्जत जान्छ ! नारीको मात्र जाने ? इज्जत के पुरुषको चाहि इज्जत हुदैन त ?? पुरुषले नारीलाइ दुव्र्यवहार ,बलात्कार जस्तो लज्जित हुने काम गर्नकोलागी प्रमाणपत्र पाएको छ र ? आज दुःख लाग्छ!
किन उसलाई जन्म दिने पनि एउटा महिला नै हो भने कुरा बुझ्दैनन ? महिलाको कोखबाट जन्म लिन्छ । महिलाको साथमा रमाउन खोज्छन् र महिलाको दुरुपयोग गर्छन्। के आफ्नो घरको महिला मात्र महिला हो ? उसको लागि महिला कहिले सम्म एउटा खेलौनाको रुपमा प्रयोग हुने ? र आज दुःख लाग्छ यो अबोध बालिकाले बलात्कारको शिकार बन्नुपर्ने ??
लकडाउनको समयमा पनि आफ्नो घर आफ्नो समाजमा पनि शारिरिक शिकार दुब्र्यबहार सहनु पर्ने सुनिन्छ । जो आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको निम्ति हिड्ने र पुरा नभए शोषण भयो भन्नेहरुको केश दर्ता गर्छन् । र आज पनि धेरै महिला पीडित छन् । जो शोषण सहनु उनीहरुको लागि सामान्य भईरहेको छ। उनीहरु इज्जत र सामाजिक पहिचान सयौं महिला पीडित छन्। आज उनीहरु म पीडित छु भन्न चाहदैनन्। र मनमनै पीडा लुकाएर पुरुषको दमन नै उनीहरुको सहारा भइसकेको छ। आखिर कहिलेसम्म सुकिलामुकिला नारीको मात्रै आवाज बुलन्द हुने ! के आज अबोध बच्चा यसको शिकार बनिरहदा समाज कता जाँदै छ ? आज अरुको छोरी भयो–मेरो होइन र अगुवाई बनेर यस्तो केसलाई हजारमा खरिद नगर्नु राम्रो हो। यस्तो मानसिक रोगीलाई उपचारको पनि जरुरी छ। त्यस्ता पिडितलाई सम्बन्धित ठाँउसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्दिनुस्। कि पैसामा समाधान हुन्न। यो कुरा बुझ्नुस् ।
आज यो समाजमा अरुको हुन्छभने भोलि हजुरको पनि पालो आउन सक्छ । पृथ्वी गोलो छ सबैले ध्यान दिउ,– यस्तो कुरालाई लुकाउनु हैन सम्बन्धित ठाँउमा खबर गरि सहयोग गर्नु हादिक अपिल गर्द्छु। आफ्नो मानबताको पहिचान दिउ, । नारीको समान गरौं।